Raha ireo 25 narary notsaboina tao Fenoarivo Atsinanana teo aloha teo dia efa sitrana sy afaka namonjy ny tranony avokoa izy rehetra. Ireo tranga roa ny 16 oktobra sy ny tranga iray tao Soanierana Ivongo ny 17 oktobra dia efa samy nahazo ny fitsaboana azy avokoa ka sitrana soa aman-tsara ankehitriny. Ilay maty tao Vavatenina ny 16 oktobra teo kosa dia tsy narary tany an-toerana fa narary notsaboina tao Toamasina nitsoaka ny hopitaly nitsaboana azy ka maty tany Vavatenina. Distrika roa kosa tany an-toerana no tsy nahitana tranga na pesta hatreto dia ny any Maroantsetra sy ny any Sainte-Marie. Nefa tao anatin’izay rehetra izay, nentina nisorohana ny tsy fiparitahan’ny aretina dia olona miisa 1.460 nifanosinkosina tamin’ireo narary no nomena ny fitsaboana sahaza azy ireo avy ka tsy nisy ny narary. Manao antso avo hatrany Atoa Ramaroson Jacques lehiben’ny faritra fa mitohy ny ezaka hiarovana ny vahoakan’Analanjirofo amin’ny pesta, dia ny fanadiovana tanàna sy fanondrahana fanafody ary ny fanamafisana ny barazy ara-pahasalamana amin’ny lalam-pirenena fahadimy.